Ndaimusvira zvekudzvura beche nemboro - ukanyatsoitirwa chikapa unochema nekunakirwa! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndaimusvira zvekudzvura beche nemboro – ukanyatsoitirwa chikapa unochema nekunakirwa!
Ndaimusvira zvekudzvura beche nemboro – ukanyatsoitirwa chikapa unochema nekunakirwa!
Mboro yangu yairova makona ese ebeche apa rainaka zvakaoma, matinji ake ndainzwa achiita zvekubata zimboro rangu achiita sekunamatira pariri uku machende achirova pasi pebeche waingonzwa kuti tya tya tya.
Ndakamusvira takadaro kwe 30minutes asi iye haana kuneta pachikapa, zvamunoona ukanyatsoitirwa chikapa unochema chete nekunakirwa. Tose taichemerera zvinyoro nyoro tichidaidzana mazita softly, mwanasikana akakanda musoro wake shure ndokurega kundibatirira ndokuisa maoko ake pamubhedha akagara nemanhede akavhura beche rese, ini ndakasimuka ndokunopfugama ndava pamubhedha kutevera beche rakanunira ndokuripomba akadaro zvengozi chaizvo.
Akachemerera achipindura maziso ake akanaka nekunakirwa, one hour yakunokwana ndichingopombora beche non-stop, ndakamufongoresa pakona yemubhedha ini ndokuita zvekumira ndakatsika mubhedha negumbo rimwe chete ndokuita zvekudzvura beche nemboro ndichiita sekusvetukira pariri uku ndakabata mazamu ake ndichitswinyirira tuminyatso, pamwe ndombosveerera mberi kwake ndakabata beche uku shure ndichirikwatura nemboro zvakadaro.
Handina kuziva kuti mwana uyu anogona chikapa padoggy style futi, akakunyungudza chiuno nemagaro akatsvukira akabata rimwe garo rake neruoko rwumwe chete uku achigomera zvinopa manyemwe pese paipinda mboro mubeche rake achiti ‘‘aaah aaaah unogoooona kaaaani, aaaah aaaaah aaaaamai kaaaani ndakuvaaara nemboro kaaaani’’ .
zvekudzvura beche nemboro